'कुबेर खड्का'को घरमा रामेश्वर खनाल | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
‘कुबेर खड्का’को घरमा रामेश्वर खनाल
माघ १७ गते, २०७२ - १०:४४
राजनीति र हामी
पंक्तिकारलाई भरसक जाति, धर्म र राजनीतिको विषयमा टिप्पणी गर्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ । यद्यपि तिनै विषयबाट सिर्जित भ्रम, पाखण्ड, विभाजन, संकीर्ण मानसिकतालाई झेल्दै बाँच्नुपरेको परिवेशमा मौन बस्नु ठीक हुँदैन भन्ने लाग्दो रहेछ ।
जातीयता, जातिय संस्कार र संस्कृतिको संवर्द्धन गरिनुपर्छ । कुप्रथाहरुलाई छोड्दै असल संस्कारहरुको संरक्षण गर्नसके जातीयताको कारण समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई कुनै बेफाइदा छैन । अन्यथा जात र नाकको हिसाबकिताबले समाजका लागि केहीपनि गर्दैन । धर्म परम्परागत रुपमा समाजलाई अनुशासनमा बाँध्ने व्यवस्था हो । त्यसप्रति आस्था हुनु आफैमा नराम्रो होइन । हरेक धर्ममा केही न केही गलत मान्यताहरु छन् । तिनीहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । तर धर्मभिरु हुनु र धार्मिक भावनाहरुलाई निषेध गर्नु दुवै प्रत्युत्पादक हुन्छ । हामी नेपालीहरुबीच रहिआएको धार्मिक सहिष्णुताकोबारेमा आज कसैले प्रवचन दिनु र सिकायत गर्नु आवश्यक नै छैन । विडम्बना, हामी आफैभित्र भएको कस्तुरी चिन्न नसकेर अरुले कान फुकेकै आधारमा तरङ्गित भइदिन्छौं ।
टी एन रेग्मी
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको समयमा जन्मिएका नयाँ भनिने हरेक पार्टीहरुले शक्ति आर्जनका लागि देखाएका सपना पूरा गर्न जरुरी ठानेनन् । आफ्नो उदेश्य र समाजको आवश्यकताबीच तारतम्य मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई नेतृत्व गर्नेहरुले आत्मसात् गरेनन् । संविधानसभाका लागि मत माग्न जानेहरुले पुल, नहर, बाटो-घाटो र कभर्ड हलको आशा देखाए । राम्रो संविधान बनाउँछु र यी यी मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुन्छु भनेर स्पष्ट पार्न सकेनन् ।
संविधान बनिसक्दा समेत एउटै मुद्दाको अपनत्व सबैले एकैसाथ दाबी गरे । सिङ्गो मधेसले नयाँ संविधान सहजै स्वीकार्न सकेन । आन्दोलन सुरु भयो । मधेस आन्दोलनलाई काठमान्डुले न महत्व दियो न त बेवास्ता गर्न नै सक्यो । यसप्रकार हामी हरेक वर्ष गोलमटोल राजनीतिको शिकार हुनुपरेको छ । समग्रमा हामीकहाँ राजनीति गर्नेहरु आफ्नो सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र जनअपेक्षाको बारेमा नै स्पष्ट छैनन् । गणतन्त्र प्राप्तिपछि जनतामा झन् नैराश्य छाएको छ । यही मौकामा नयाँ नयाँ शक्तिहरु नयाँ सपनाको पुलिन्दा बोकेर दृश्यमा आउँदैछन् ।
उच्च प्रशासक र विज्ञ व्यक्तिको छवि बनाएका रामेश्वर खनालले कुबेर खड्का नाम भएको व्यक्ति साँच्चिकै कुबेर हो भन्ने ठान्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । आशा गरौं, उनले कुबेर ठानेको व्यक्ति गाउँको सबैभन्दा धनी व्यक्तिसम्म होस् । उसको घर बलियो होस् । केही वर्षपछि ‘रातो स्टिकर’ लगाएर बाहिरिनु नपरोस् । नयाँ शक्तिलाई शुभकामना !
नेपालका नयाँ र क्रान्तिकारी भनिएका शक्तिहरुले समेत जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको इतिहास छ । त्यसैले जनतामा नयाँ शक्ति ठीक कि पुरानो ? भन्ने विषयमा बेलाबखत द्विविधा पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले चौथो शक्तिको दर्जा पाएको जनता झुक्किएर होइन । बरु क्रान्तिकारी शक्तिप्रति जनताको विश्वास कम भएर हो । त्यो अविश्वासलाई चिर्ने स्पष्ट योजना लिएर आउने पार्टीलाई मात्रै आगामी दिनमा जनताले विश्वास गर्नेछन् ।
राजनीति सही वा गलत हुन सक्छ । राजनीतिक पात्र र विचार ठीक कि बेठीक ? भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ । तर राजनीतिविहीन आधुनिक समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । संसारभर समाजको नेतृत्व गर्ने काम राजनीतिले गरेको हुन्छ । हामीकहाँ राजनीति गर्ने पात्रहरु, उनीहरुको कथनी र करनीमा हुने फरकका कारण समाज समयसँगै अगाडि बढ्न नसकेको हो । राजनीति आफैमा बेठीक होइन । कुनैपनि शक्ति, कुनै पनि वाद आफैमा शतप्रतिशत सही वा गलत हुँदैन ।
कर्ता, कर्म र कार्य विभाजन
‘चैते-काङ्ग्रेस’ नेपाली राजनीतिमा प्रचलित वाक्यांश हो । शान्ति प्रक्रियाका दौरान ‘अयोग्य’ भन्ने शब्द निकै चर्चित रह्यो । अयोग्यहरुले यसो गरे, उसो गरे भन्ने समाचार हेडलाइनहरु निकै लेखिए । ‘मण्डले’, ‘दलाल’, ‘गद्दार’, ‘उग्र वामपन्थी’, ‘जड सुत्रवादी’ जस्ता अनेक विशेषण विभिन्न पात्रहरुको लागि फरक फरक समयमा प्रयोग गरियो । ती सबै उपमा निश्चित कर्ता, कर्म र कार्य विभाजनका सन्दर्भमा प्रयोग भएको थियो ।
समसामयिक नेपाली राजनीतिमा कर्ता, कर्म र कार्य विभाजनको तालमेल देखिँदैन । त्यसैले समाजको निम्ति राजनीति गर्छु भन्नेहरुलाई सर्वसाधारणले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । अहिले शक्तिमा रहेका राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु निश्चित व्यक्तिगत वा सामुहिक स्वार्थलाई शिरोपर गरेर मैदानमा उत्रिएका सयौं उदाहरण पाइन्छ । यसले समाजमा राजनीतिका नाउँमा विकृतिलाई बढाएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा व्यापार वा अन्य कुनै धन्दा चलाउन, सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दोहन गर्न र शक्तिशाली बन्नका लागि गरिने राजनीतिका कारण जनता दिक्क छन् । यसैबीच जनताले अपेक्षा गरेजस्तो शक्ति बन्ने दाबीका साथ नयाँ शक्ति नाम गरेको सङ्गठन निर्माण भएको छ । कुनै पनि सङ्गठन निर्माण हुँदैमा उत्साहित हुनुपर्ने कारण केही छैन । त्यसका कर्ता, कर्म र कार्य विभाजनले धेरै कुरा स्पष्ट हुँदै जानेछ । नयाँ शक्तिको सङ्गठन शक्तिका पूजक र महत्वाकांक्षी पात्रहरुको भीडमात्रै नबनोस् । अहिलेलाई यतिमात्रै आशा गरौं ।
‘कुबेर खड्का‘ र रामेश्वर खनाल
पूर्वअर्थसिचव रामेश्वर खनाल नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेसँगै बजारमा एक किसिमको बहसको सुरुवात भएको छ । खनालको विगतका बारेमा धेरै कुरा नबुझ्नेहरुले पनि जागिरे जीवनको अन्तिमतिर लिएका अडानहरुका कारण उनलाई सम्झछन् । त्यसपछिका प्रायःजसो गतिविधि र भनाइप्रति सर्वसाधारणले चासो राख्छन् । कर छली प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग मतभेद भएपछि खनालले राजीनामा दिएका थिए । तत्‌पश्चात् केही समय निस्क्रिय देखिएका उनी संविधानसभा चुनावताका विभिन्न पार्टीहरुको तानातानमा परे । अन्तत: नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक उमेदवारको सूचीमा देखिए । खै कुन संयोगले संसदमा पुग्ने मौका जुरेन ।
काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अन्यायमा परेको बुझाइसहित उनी नयाँ शक्तिमा जोडिन पुगे । हालसालै प्रकाशित एक अन्तरवार्तामा खनालले आफ्नो लागि ‘काङ्ग्रेसको गेटको ताल्चा खुले पनि मुलढोकाको ताल्चा नखुलेको र आफू बाहिरै परेको’ बताएका छन् । साथै पार्टीहरुको शुद्धीकरण गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । र, नयाँ शक्ति अब्बल राजनीतिक शक्ति भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘बाबुराम भट्टराईले विगतको गल्ती महसुस गरेको र सच्चिने प्रयास गरेको’ कारण आफूले साथ दिएको खनालको तर्क छ । सच्चिने वा विगतमा गरेको गल्ती स्वीकारेको हदसम्म ठीक छ तर सच्चिएर सबैभन्दा आदर्श नेतृत्वको रुपमा स्थापित हुने सन्दर्भमा पर्खेर हेर्नु नै उचित हुनेछ ।
हामी चाहे संसारको जुनसुकै कुनामा पुगौं अपवाद बाहेक मान्छेहरुको नाम र काम मिल्दैन । बोली र व्यवहार मिल्दैन । नेपाली धनबहादुर, मनबहादुर र कुबेरहरु नामले अर्थ्याएको भन्दा ठीक उल्टो अवस्थामा हुन्छन् । त्यसैले नयाँ शक्तिले नयाँ तरिकाले नै काम गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।
उच्च प्रशासक र विज्ञ व्यक्तिको छवि बनाएका रामेश्वर खनालले समेत कुबेर खड्का नाम भएको व्यक्ति साँच्चिकै कुबेर हो भन्ने ठान्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । आशा गरौं, उनले कुबेर ठानेको व्यक्ति गाउँको सबैभन्दा धनी व्यक्तिसम्म होस् । उसको घर बलियो होस् । केही वर्षपछि ‘रातो स्टिकर’ लगाएर बाहिरिनु नपरोस् । नयाँ शक्तिलाई शुभकामना !
माघ १७ गते, २०७२ - १०:४४ मा प्रकाशित
नेकपा एकता : कसको दावी के मा ? नीति र बाँडफाँड टुगिंयो, व्यक्ति टुंगिएन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय निकाय र विभागहरुको एकताको टुंगो लगाएको छ । मंगलबार...
भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिको छोरो सुटुक्क नेपालमा : केके गरे नेपाल बसाईमा ?
काठमाडौं । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मदुरोको छोरो सुटुक्क नेपालमा आएका छन् । गहिरो राजनीतिक संकटसँग...
विप्लव वार्ता : सत्तापक्ष भन्छ एक-दुई हप्तामा सरप्राइज ! विप्लव पक्ष भन्छ – सम्भव छैन
काठमाडौ । नख्खु कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्व नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश...
पेनाल्टी छेकेर गोलरक्षकले जिताए ! ब्राजिल सेमिफाइनलमा
एजेन्सी । गोलरक्षक एलिसन बेकरले टाइब्रेकरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि ब्राजिल कोपा अमेरिका २०१९...
पाकिस्तानका बाबरले तोडे सचिन तेण्डुलकरको रेकर्ड
काठमाडौं । आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत ३३औं खेलमा पाकिस्तानले न्यूजिल्याण्डलाई ६ विकेटले...
ओलीले नेपालसँग भने–कहाँको ३३ कहाँको १३, किन माओवादीसँग सत्ता आधाआधा ?
काठमाडाैं । गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग हिसाब...
विषादी प्रकरण र नेपाली मानसिकता
पुस्तकमा कर लगाउने विषयले उठाएको प्रश्न
बजेटमा विभेद भन्नु वाहियात हो
युवाको सवालमा बजेट पुरै माैन
हामी मार्क्सवादकै निर्देशन र पथप्रर्दशनमा अगाडि बढेका छाैं
सरकारको युद्ध उत्तेजना फैलाउने रणनीति
कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो भूमिका
नेपालमा युद्ध हैन क्रान्ति चाहिन्छ
सोभियत युनियनको विघटनबाट सिकौं, मौलिकताभन्दा बाहिरबाट समृद्धि सम्भव छैन